Colono Lodge Amantani - I-Airbnb
Colono Lodge Amantani
Igumbi lakho lokulala e indlu engasemva sinombuki zindwendwe onguSaúl Cari
Wamkelekile kwiNdlu, i-CCOLONO- LODGE ikwindawo yokuhlala kwidolophana (ccolono) Isiqithi sase-Amantani entliziyweni yeLake Titicaca. Into ebaluleke kakhulu kukuba indlu inombono obalaseleyo weLake Titicaca kunye nokungena kweLanga yinto eyahlulayo. kuthi evela kwabanye. sibonelela ukutya okunempilo (Organic) kunye ingqalelo sidima kakhulu, efudumeleyo nezinobuntu namagumbi zethu awunangxaki, ukuhlala iya kuba ngamava awayengenakuyilibala ukuba umlingo kunye nomtsalane, bavakalelwa ekhaya, ndlu lethu ikhaya lakho.
Funda inkcazo ngononophelo. Indawo yokuhlala ijoliswe kubakhenkethi, abathandi abanqwenela UKUBUVA ubomi basemaphandleni kwiLake Titicaca. Le ndlu ikwiSiqithi sase-Amantani-iLake Titicaca (indawo yasemaphandleni), ineembono ezimangalisayo zechibi, unokujonga ngokusondeleyo izithethe zabemi besiqithi. Indlu ikubonelela ngeenkonzo ezitofotofo nezisisiseko; njenge-WIFI, ishawa yamanzi ashushu iiyure ezingama-24 ngosuku, ezifumanekayo kwindwendwe. Ukuhlala okucetyiswayo kula mava bubusuku obu-1.
Indlu ine-patio encinci kunye namabala avulekileyo, njengoko ibekwe kwindawo yasemaphandleni unokuhamba kwamahhala ukungena nokushiya ipropati nanini na xa uthanda. Gcina ukhumbula ukuba ukuhlala esiqithini KUYIMAVA EYINGQIWEYO KWAYE OMANGALISAYO kunokuhlala ehotele.
Umbuki zindwendwe ngu- Saúl Cari